Spirit Airlines izao tsy mijanona eo anelanelan'ny Orlando sy St. Thomas
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Nosy Virijiny Amerikana » Spirit Airlines izao tsy mijanona eo anelanelan'ny Orlando sy St. Thomas
Ny governoran'ny nosy amerikanina Kenneth E. Mapp sy ny lefitry ny lietnà Obsert E. Potter, mpikambana ao amin'ny Fahefana seranan-tsambo Virgin Islands ary ny departemantan'ny fizahan-tany dia nandray ny sidina Spirit Airlines voalohany avy any Orlando mankany St. Thomas tamin'ny fiatoana io tolakandro io.
Ny sidina fanahy 284, niaraka tamin'ny mpandeha 145 feno, dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Cyril E. King fotoana fohy talohan'ny 3 hariva tany amin'ny fiarahabana trondro tafondro rano. Ny Airbus 319 dia noarahabaina tamina lohahevitra karnaval, santionan'ny ronono Cruzan ho an'ny mpandeha ary fandraisana vahiny mafana ao amin'ny Nosy Virgin. Bilaogera mpandehandeha efatra sy mpiorina amin'ny haino aman-jery sosialy no tonga teny amin'ny sidina ary handany andro vitsivitsy any amin'ilay nosy hiaina ireo zava-manintona an'i St. Thomas, ary koa fitsangatsanganana iray andro any St. John.
Spirit Airlines dia hiasa sidina telo isan-kerinandro eo anelanelan'ny Orlando sy St. Thomas, ny talata, alakamisy ary alahady. Manampy ny sidina isan'andro eo anelanelan'ny Fort Lauderdale sy St. Thomas ny serivisy.
Misaotra ny zotram-piaramanidina nanamafy ny "làlambe an'habakabaka" mankany amin'ny Nosy Virgin, ny governora Mapp, lietnà governora Potter ary ny komisera mpanampy ny fizahan-tany Joyce Dore-Griffin dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny tsenan'i Florida Afovoany ho any amin'izay nalehany, na ho an'ny fizahan-tany fialamboly nentim-paharazana na VFR (Visiting Mpinamana sy havana) mpandeha.
Kay Milliner-Kitchens (ankavanana), talen'ny varotra ao amin'ny departemantan'ny fizahantany USVI, dia niditra tao amin'ny fankalazana tao Orlando io maraina io.
Noraisin'ny Governora ny ekipan'i Spirit sy ny mpandeha tao St. Thomas ary nisaotra ny Sampan-draharahan'ny fizahan-tany noho ny ezaka mitohy manatsara ny fampandrosoana ara-toekarena ireo nosy amin'ny alàlan'ny fisarihana ny fitomboan'ny fiaramanidina mankany amin'ny Teritory. "Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Spirit Airlines dia mitombo hatrany ary manitatra ho tombontsoan'ny mponina ao amin'ny Nosy Virgin sy ny tombotsoan'ny mpiasan'ny Spirit Airlines sy ny tompon'andraikitra ary manantena ny hanamafy ny fifandraisanay amin'ny ho avy," hoy izy.
Ho setrin'izany, Stephen Schuler, Talen'ny Fifandraisan'ny Fanahy, dia nitantara ny fahasambaran'ny kaompaniam-piaramanidina niasa tamin'ny ekipa fizahan-tany Virgin Islands. "Amin'ny maha-zotram-piaramanidina anay dia tianay ny miara-miasa amin'ireo vondrona tena tsara ary ity no tsara indrindra eto amin'ny indostria, ny tsara indrindra eto an-tany," hoy i Schuler, ary nampiany fa ny kaompaniam-pitaterana dia eo amin'ny sehatry ny fampifandraisana ny fianakaviana sy ny namana ary manome safidy ambany kokoa ho an'ny olona mandeha.
Talohan'ny niaingany tao Orlando, nisy mpandeha nitsena azy ireo solontenan'ny fizahantany, mozika vy, mpandihy karnavaly ary mofomamy fankalazana ho fahatsiarovana ny fisokafan'ity vavahady manan-danja ity mankany St. Thomas.
Spirit dia manompo ny nosy St. Croix miaraka amin'ny sidina telo isan-kerinandro avy ao amin'ny Fort Lauderdale-Hollywood International Airport mankany amin'ny seranam-piaramanidina Henry E. Rohlsen.
Horohoron-tany 6.8 mahery no namely ny faritra Jan Mayen
Benchmark's Ellen Sinclair dia iray amin'ireo "Vehivavy 25 ambony ao amin'ny indostrian'ny fivoriana"